Maxkamad ku taalla dalka Turkiga oo fasaxday baadari Andrew Bronson – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMaxkamad ku taalla dalka Turkiga oo fasaxday baadari Andrew Bronson
Hiiraan Xog, Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa sii deysay baadari u dhashay dalka Mareykanka oo labadii sano ee lasoo dhaafay ku xayirnaa dalka Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa baadarigan u heysatay fal danbiyeed la xiriira argagaxisanimo iyadoo xayiraadda baadiragani ay sababtay in uu khilaaf weyn oo diblumaasiyadeed soo kala dhex galo labada dal ee ka wada tirsan gaashaan buurta NATO ee Turkiga iyo Mareykanka.
Khilaafka diblumaasiyadeed ee ka dhashay xayiraadda baadiragan u dhashay dalka Mareykanka ayaa sababay dagaal dhaqaale oo uu Mareykanku ku qaaday dalka Turkiga si uu ugu cadaadiyo sii deynta baadarigan Mareykanka ah, dagaalkaasi ayaana sababay qiimo dhac ku yimaaday lacagta Liiraha dalkla Turkiga laga isticmaalo.
Maxkamaddan ku taalla Izmiir ayaa sadex sano oo xabsi guri ah ku xukuntay Andrew Brunson kadib markii lagu soo eedeeyay in uu gacan siiyay ururo argagixiso balse muddo laba sano ah kadib maxkamadda ayaa sii deysay baadirkan 50 jirka ah.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumo oo ka hadlayay isisoo bax ka dhacay gobolka Ohio ayaa sheegay in baadari Andrew Brunson laga sii daayay xabsiga, madaxweynaha ayaa intaas ku daray in dalka Jarmalka lagu hubin doono caafimaadkiisa.
Madaxweyne Turmp ayaa sheegay in uusan wax heshiis ah la galin Turkiga si loo sii daayo baadari Andrew Brunson.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa dowladda Ankara ugu baaqay in ay xabsiyada kasii deyso maxaabiista kale ee u dhashay dalka Mareykanka.
Taallo lagu xasuusanayo xasuuqii 14-kii October oo laga dhisay Isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho